ताजा chorizo ​​| भरपर्दो र कोमल preñaos बन्स ThermoRecines
यी बन्स खाऊ गर्भवती हुन घरमा यो एक वास्तविक स्वादिष्ट पदार्थ भयो। र यो होइन कि तिनीहरूलाई बनाउनको लागि यसले धेरै काम लिन्छ तर पर्मामा, र मलाई लाग्छ बाकी इटालीमा त्यहाँ कुनै पोरिजो छैन!
अविश्वसनीय तर सत्य। उनीहरूसँग धेरै स्वादिष्ट चिसो कटाहरू छन् (प्रशिसुट्टो, सलामी ...) चीजको एक विशाल विविधता (परमेसन, रिकोटा ...) तर उनीहरूसँग छैन। chorizo.
भाग्यवस, अन्तिम पटक हामी स्पेनमा हुँदा हामीले ब्रिहुगाबाट केही तारहरू ल्यायौं र यसको लागि आज हामीसँग लक्जरी नास्ता हुनेछ।
Preñaos बन्स बनाउन को लागी धेरै सजिलो छ, सबै चीज जस्तै Pan, उनीहरूलाई उठ्नको लागि तिनीहरूको समय चाहिन्छ। आदर्श भनेको उनीहरूलाई ताजा चोरिजोको साथ बनाउनु हो र यदि उनीहरू तातो खाइन्छन् भने ताजा बनाइन्छन् भने तिनीहरू चरम हुन्। तर यदि तपाईं तिनीहरूलाई कोरिजोले भर्ने जस्तो महसुस गर्नुहुन्न (वा तपाईंसँग यो छैन) तपाईं यसलाई चीजको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ वा जे तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। र अर्को लाभ, तपाईं तिनीहरूलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको साथमा तपाईले डाईएको प्राकृतिक साइडरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? हामी जो ती गर्न सक्दैनौं, हामी यससँगै रमाइलो गर्नेछौं विशेष स्याउ को जुस त्यो आइरिनले हामीलाई सिकायो।
प्रिआओसका लागि नुस्खा "सिम्पली स्पेक्ट्याकुलर" किताबबाट लिइएको हो र यस मामलामा उनीहरूले शीर्षकसँग गल्ती गरेका छैनन्। उनीहरुको आनन्द लिनुहोस्!
1 गर्भवती हुनुहोस्
रोटीको एक उत्कृष्ट टोकाइ Chorizo ​​भरिएको र Thermomix संग बनेको, बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि खाजाको रूपमा आदर्श, पार्टीहरू वा भ्रमण गर्न।
G० g ताजा प्रेस गरिएको खमीर
450 g ताकत आटा
नुन १2चम्मच
२०० ग्राम ताजा chorizo
हामीले दुधलाई गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं १ मिनेट, ººº, गति २।
खमीर थप्नुहोस् र मिक्स गर्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
अण्डा, माखन र आधा र कार्यक्रमको आधा थप्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 30।
हामीले बाँकी पिठो र नुनलाई शीशामा राख्यौं। हामी प्रोग्राम २ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति।
आटा गिलास भित्र आराम गर्न दिनुहोस् जब सम्म यो भोल्युम (लगभग minutes० मिनेट) मा दोब्बर हुन्छ।
जब यसको परिमाण दोब्बर भयो, स्प्याटुला र प्रोग्रामको मद्दतले आटा कम गर्नुहोस् १ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति।
हामी गिलासबाट पिठो बाहिर निकाल्छौं र यसलाई आटाले धुलो भएको कामको सतहमा राख्छौं र यसलाई सिलिन्डरमा आकार दिन्छौं। हामीले करीव g० g को आटाको अंश काट्यौं र हामी त्यसलाई बलमा आकार दिन्छौं। हामी प्रत्येक बल भित्र चोरिजोको एक टुक्रा परिचय गर्दछौं, तिनीहरूलाई तल बन्द गरेर। प्रिकिओसलाई बेकिंग ट्रेमा राख्नुहोस् पहिले बेकिaking पेपरमा लाइन गरियो र यसलाई भोल्युम (२० वा minutes० मिनेट) मा डबल नगरेसम्म आराम गर्न दिनुहोस्।
हामी ओभनलाई १º०º मा गरम गर्छौं। हामी कुटेको अण्डाको साथ प्रिओस पेन्ट गर्दछौं र ट्रेलाई ओभनमा राख्छौं। हामी तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्छौं जब तिनीहरू सुनका हुन्छन् (लगभग १ or वा २० मिनेट पछि)।
थप जानकारी - विशेष स्याउको जुस
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सामान्य, आटा र रोटी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » आटा र रोटी » गर्भवती हुनुहोस्
नमस्ते, तिनीहरू धेरै राम्रा देखिन्छन् ... र मलाई सबैभन्दा मन पराउने कुरा के हो उनीहरू स्थिर पक्कै गर्न सक्छन्!… कहिले तिनीहरू स्थिर गर्नुपर्दछ? अघि वा पछि अन्तिम भोल्यूम वृद्धि हुन्छ?
र अर्को प्रश्न .. राम्रो संग तिनीहरूलाई भरिने बिना स्थिर गर्न ???
एक पटक सुविधाको लागि पकाइएको म तिनीहरूलाई स्थिर गर्दछु। तर तपाईं तिनीहरूलाई भर्न पनि सक्नुहुन्छ, दोस्रो लिफ्टको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई स्थिर गर्नुहोस्। तपाईं मलाई बताउनुहुन्छ कसरी उनीहरू बाहिर निस्के!
क्रिस्टिना एफ भन्यो
मलाई यो धेरै मनपर्‍यो, तर म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यसलाई फ्रिज गर्ने अवस्थामा, दोस्रो लिभेसन पछि, के यसले कोठाको तापक्रममा डिफ्रोस्ट गर्न अनुमति दिइनुपर्दछ, वा यसलाई फ्रिजरबाट बाहिर निकाले पछि बेक गर्न सकिन्छ?
क्रिस्टिना एफ लाई जवाफ दिनुहोस्
म तिनीहरूलाई कोठाको तापक्रममा पग्लन दिन्छु र त्यसपछि बेक गर्छु। यदि तपाईं उनीहरूलाई सिधा फ्रीजर बाहिर बेक गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई केहि सेकेन्ड (is मिनेट लगभग) बेक गर्नुपर्दछ, त्यसपछि तिनीहरूलाई स्थिर गर्नुहोस् र जब तपाईं तिनीहरूलाई उपभोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईं तिनीहरूलाई फ्रीजरबाट बाहिर लैजानुहुन्छ र राख्नुहुन्छ। ओभनमा सीधा बनाउन समाप्त गर्न।
धेरै राम्रो छ, मैले तिनीहरूलाई हिजो गरें, मैले अरू मानिसहरूलाई यर्क हेम र चीजले भरें, अरूले ककटेल सॉसेजले (सानालाई) थोरै केचअप दिए, तिनीहरू धेरै राम्रा बाहिर आए ...
कोन्चीलाई जवाफ दिनुहोस्
यस जस्तो टिप्पणीहरू पढ्न पाउँदा म खुसी छु। तपाईंले धेरै राम्रो गर्नुभयो किनकि यस रेसिपीको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि यसमा धेरै धेरै सम्भावनाहरू छन् र यसले हामीलाई हाम्रो रुचिमा सानो गर्भावस्था बनाउन अनुमति दिन्छ।
हामीलाई भन्नु भएकोमा धन्यवाद!
खैर, मसँग तिनीहरू ट्रेमा छन् रातको खाना खानको लागि आउनु भनेर म पर्खीरहेको छु, मैले पहिले नै बन्स को फ्रीज गर्ने र डिफ्रोस्ट गर्ने बारेमा प्रश्नहरू देखेको छु ... धन्यवाद र यदि उनीहरू अर्को जन्मदिनको लागि राम्ररी जान्छन् भने म तिनीहरूलाई गर्छु।
त्यसोभए ती प्रिअसोसलाई के हुन्छ? मलाई भन ...
कसरी धेरै प्रेसकहरू यस फ्लावरको राशिको साथ आउँछन्? धन्यवाद।
MIGUEL लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई ठ्याक्कै याद छैन तर यो २० भन्दा बढी वा कम हुन सक्छ ... मलाई थाहा छ कि म दुई बेकिंग ट्रेहरू प्रयोग गर्दछु र म तिनीहरूलाई दुईवटा डुches्गामा बनाउँछु, किनकि तपाईंले तिनीहरू बीच छुट्टि छोड्नु पर्छ ताकि तिनीहरू चिप्लन नहोस्। तिनीहरू उठ्छन्।
नमस्कार, म घरमा chorizo ​​छैन, के तपाइँ chistorra संग राम्रो बाहिर आउनेछन् लाग्छ, वा ती धेरै मोटो हुनेछ?
Esperanza लाई जवाफ दिनुहोस्
नहिचकिचाउनुहोस्, chistorra को साथ गर्नुहोस् जुन तपाईंमा उत्कृष्ट देखिनेछ। तपाईलाई के ईर्ष्या गर्नुहुन्छ, चिस्टोररा कति धनी छ! यी इटालेलीहरूलाई थाहा छैन उनीहरू के हराइरहेका छन् ...
त्यसोभए मलाई भन कि यदि तपाइँ तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, ठीक छ?
योलान्डा कामचो भन्यो
प्रश्न: के त्यो रोटीको पीठोबाट बनाउनु पर्छ?
योलान्डा कामचोलाई जवाफ दिनुहोस्
कडा पिठो संग तिनीहरू धेरै राम्रो छन्। यदि तपाईंसँग सामान्य मात्र छ भने, तिनीहरूलाई बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई अधिक समय दिनुहोस्, यो कसरी जान्छ हेर्नुहोस्।
जे भए पनि, सामर्थ्यको पीठो भेट्टाउन भने धेरै गाह्रो हुन्थ्यो तर अब यो धेरै सुपरमार्केटहरूमा फेला पर्‍यो।
म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ।
सामान्य पीठको साथ तिनीहरू महान बाहिर आउँछन् र यति धेरै फरक फ्लोरहरू कोभोरमो हुन आवश्यक छैन
कोभीलाई जवाफ दिनुहोस्
ठिकै छ महान, कोवी। कहिलेकाँही हामी पनि धेरै जटिल हुन्छ ... तपाईंको योगदानको लागि धन्यवाद!
नमस्ते, मैले तिनीहरूलाई नासिल्ला र अन्यलाई चिस्टोरसको साथ बनाएँ। र nocilla ती मर्दै थिए।
Nocilla ती Ufff बोल्काओस देखिन्छ - कति धनी !!!
शुक्रबार मैले तिनीहरूलाई चोरिजो, मीठो हेम र चीज, र फ्रान्सफर्टरहरू दिएँ। कुल सफलता तातो तिनीहरू स्वादिष्ट छन्। डबल बनाउनको लागि, यो दुई डचहरूमा यो भन्दा दुई गुणा रकममा राम्रो गर्न सकिन्छ?
महान, Carmen! म कति खुसी छु
म तपाईंलाई भन्दछु कि यो दुईवटा झुण्डमा गर्नु राम्रो हो किनभने तपाईले दुबै रकम लिनु भने मलाई यो गिलासमा फिट हुने छैन।
यदि तपाईं तिनीहरूलाई पुलबाट बेक गर्नुहोस्। र तपाईंलाई यसको भ्रमणको लागि आवश्यक पर्दछ यो वातावरणीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
यो बिहान सबेरै छ जब हामी भ्रमणमा जान्छौं र कुनै चुल्हा छैन
हो, हो, कुनै समस्या छैन !!
म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ 😉
म सिलियाक हुँ, म तिनीहरूलाई मकैको पीठो बनाउन सक्छु?
यो सत्य हो कि मकैको पिठोमा ग्लुटन हुँदैन तर यदि तपाईं केवल यस प्रकारको पीठो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने नुस्खाले काम गर्दैन। यदि तपाईंसँग आफ्नै ग्लूटेन रहित रोटी पीठो बनाउने विधि छैन भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं रोटीको पीठको प्रकार हेसेन्डाडो, प्रोसेली, स्छार आदि प्रयोग गर्नुहोस्।
राम्रो जयकार, मलाई थाहा छ कि ग्लुटन-मुक्त पकाउनको लागि चुनौतीहरू स्थिर छन् !!
मोशा आर भन्यो
मैले रेसिपी बनाएको छु जस्तो तपाई दर्शाउनुहुन्छ तर मैले गल्ती गरेँ, मैले थिचेको खमीरको सट्टामा बेकिंग पाउडर थप्यो। तैपनि मँ रेसिपीको चरणहरू जारी राखें र मैले भन्नु पर्छ कि एक पटक बेक्ड नतिजा अविश्वसनीय हो। म यस्तो कोमल र धनी आटा स्वाद गरेको याद छैन।
मेरो केसमा मैले तिनीहरूलाई चोरिजो र चीजको केही टुक्राहरू भर्ें र मैले तिनीहरूलाई मध्यम / ठूलो बनाएँ, त्यसैले मैले gener उदार बन्स पाएको छु।
तिनीहरू डराउँछन् !!
Moisés R लाई जवाफ दिनुहोस्
महान, मोशा! घरमा हामी उनीहरूलाई धेरै मन पराउँछौं। यदि तपाईं सामान्य रूपमा सुक्खा, दाना बेकरको खमीर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, अर्को पटक १० ग्राम थप्नुहोस्।
हामीलाई लेख्न को लागी धेरै धन्यबाद।
ओभिडोमा मंगलबार देश मंगलबार हो र यो गर्भवती रोटी खाने परम्परा हो। यि धेरै बर्ष सम्म धेरै व्यंजनहरु प्रयास गरे पछि मलाई विश्वास भएन, मैले यो बनाएँ। एक चमत्कार! यो साझेदारीको लागि धेरै धन्यबाद, म सँधै यसलाई प्रयोग गर्नेछु!
नाटलाई जवाफ दिनुहोस्
महान नतालिया !!
मलाई खुशी छ कि तपाईंले नुस्खा र पार्टीको मजा लिनुभयो !! 😉
तरबूज र स्ट्रबेरी को रस